Zyro: Si Fudud Ugu Dhiso Boggaga Ama Bakhaarka Onlaynka ah adigoo isticmaalaya Platform-ka La awoodi karo | Martech Zone
Zyro: Si Fudud U Dhiso Boggaga Ama Dukaanka Onlaynka ah Iyada oo la adeegsanayo Platform-ka la awoodi karo
Khamiista, Noofembar 11, 2021 Khamiista, Noofembar 11, 2021 Douglas Karr
Helitaanka goobo suuq-geyneed la awoodi karo ayaa sii socota inay soo jiidato, iyo nidaamyada maaraynta macluumaadka (CMS) ma kala duwana. Waxaan ka soo shaqeeyay tiro lahaansho, il-furan, iyo goobo CMS ah oo la bixiyo sannado badan… qaar cajiib ah iyo qaar aad u adag. Ilaa aan ka ogaado waxa ay yihiin hadafyada macaamiisha, agabka, iyo hababka, ma soo jeedinayo talo ku saabsan goobta laga faa'iidaysan doono.
Haddii aad tahay meherad yar oo aan awoodin inaad ku daadiso tobanaan kun oo doolar joogitaanka shabakadda, waxaad u badan tahay inaad isticmaasho aalado fudud oo aan u baahnayn codayn oo aad haysato xulasho aad u wanaagsan oo qaabaysan si aad adigu u habayso.
Markii aan dhigay a goobta spa sanad ka hor, waxaan isticmaalay madal aan ogaa inay ku siin doonto taageerada iyo agabka maamul ee macmiilkaygu u baahan yahay. Ma jirin si aan u dhiso goob u baahan dayactir joogto ah, cusbooneysiin, iyo hagaajin joogto ah… mar haddii mulkiiluhu awoodi kari waayay inuu bixiyo dadaalka heerkaas ah.
Zyro: Dhis shabakad, Bakhaar Online ah, ama Portfolio
Hal xal oo cajiib ah oo la awoodi karo ayaa ah Ziro. Zyro waxa uu leeyahay qiimayaal loo dhan yahay oo aan khatar lahayn, dammaanad lacag celin ah oo 30 maalmood ah. Xitaa waxaad heli 24/7 taageero wada sheekaysi toos ah qorshe kasta!
martigelin – Looma baahna in aad hesho bixiye martigelinaya, madal Zyro waa mid loo dhan yahay. Xitaa waxaad ka heli kartaa domainkaaga adeeggooda bilaashka ah baakadaha qaarkood.
habyaalada - Dhammaan qaab-dhismeedka Zyro waa la hagaajiyay oo ka jawaab celinta mobilada. Ku billow template maran, ama ka dooro shabkada dukaanka, moodellada adeegga ganacsiga, moodellada sawir qaadista, jaangooyooyinka makhaayadaha, qaab-dhismeedka faylalka, moodhallada dib-u-cusboonaysiinta, moodellada dhacdada, jaangooyooyinka bogga degista ama qaab-dhismeedka blog.
Tifatiraha Jiid-iyo-Dhib - Ma jiro kood lagama maarmaan ah, waxaad haysataa kontorool hal-abuur leh oo dhammaystiran oo leh qaabab naqshadeeye lagu sameeyay oo lagu habeyn karo astaantaada iyo fariimahaaga.
Dhiciyaan Search Engine -Zyro's Madal maareynta nuxurku waxay leedahay dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka u ah si kor loogu qaado goobtaada ama dukaanka makiinadaha raadinta.
Qoraa AI – Ma qoraa weyn? Kaliya ma heli kartaa wakhti aad wax ku qorto? Qoraa AI ha u soo saaro qoraal mareegahaaga inta aad dhisayso.
Ecommerce - Xirmo e-ganacsi oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan habaynta lacag-bixinta, is-dhexgalka dhoofinta, maareeyaha xidhiidhka macaamiisha (CRM), iimaylo toos ah, iyo ka warbixinta. Dukaankaaga si fudud ayaa loogu dari karaa Amazon, Facebook, iyo Instagram.
Ammaanka - Goobaha si buuxda ayaa loogu xafiday shahaadadaada SSL iyo sirta HTTPS, iyo wax kala iibsiga ecommerce sidoo kale waa la ilaaliyaa.
Warbixin Qoto dheer - Soo ogow meesha uu taraafku ka yimaado oo ku hagaaji beddelaaddaada aaladaha sida Google Analytics, Kliken, iyo MoneyData.
Zyro waxa ay leedahay tiro qorshayaal la awoodi karo oo aan lahayn kharashyo qarsoon.
Zyro waxa ay haysataa soo jeedinta Jimcaha Madoow oo soconaysa Noofambar 15keeda ilaa 7deeda Diseembar… isticmaal koodka ZYROBF oo badbaadi ilaa 86%!
Isku day Zyro bilaash!
Bixinta: Anigu waxaan ku xiran ahay Ziro oo waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda ku xiran maqaalkan.
Tags: Amazon dukaankasentimitirnidaamka maamulka contentsamee naftaadadomaintifaftiraha jiid-iyo-jiidistaecommercehagaajinta ecommercehannaanka ganacsigaganacsigaganacsiga instagramLiiskamaareynta alaabadadukaanka onlinedhise dukaanka internetkamadal dukaanka onlinewax dhisaha internetkaHagaajintagoobta faylalkaSEOadeegyada rarkaganacsiga bulshadatusaalayaasha shabakaddasiiro
SocialBee: Qalabka Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga Yaryar oo leh Adeegyada Concierge